The Lost Tomb ( 2015 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel April 05, 2017
Three Lives , Three Worlds ကို Encode လုပ်လို့ ကြာနေချိန်အတွင်းလေးမှာ အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိတဲ့ series လေး တစ်ခုကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် ... အပိုင်း အားလုံး ၁၀ ပိုင်း ပါဝင်ပြီ3းLives3Worlds ကို စောင့်နေမယ့် နေ့တွေမှာ တင်သွားပေးပါ့မယ် ...
ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ main cast တွေကတော့ ပြောစရာမလိုအောင်ကိုပဲ အရမ်းလန်းလွန်းနေပါတယ် ...
Main Actress အနေနဲ့ကတော့ -
Bounty Hunters , Perfect Couple , The Princess of Wei Young အစရှိသည့် နာမည်ကြီး ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး Tang Tiffany ....
Main Actor တွေ အနေနဲ့ကတော့ -
Love O2O ဇာတ်လမ်းထဲမှာ လူသိများခဲ့တဲ့ " ရှောင်းနိုင် " အဖြစ် လူသိများခဲ့တဲ့ Yang Yang နှင့် The Legend of Chusen ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ လူသိများလာခဲ့တဲ့ Li Yi Feng တို့ နှစ်ယောက် ပူးတွဲပါဝင်ထားပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကို ပြောရမယ်ဆိုရင် -
ရှေးဟောင်း ဂူတစ်ဂူ ရဲ့ မြေပုံကို မတော်တဆ တွေ့မိပြီး ရှာဖွေကြတဲ့ အခါ ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကို ရိုက်ကူးပြသထားတာပါ ... ရင်တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်လမ်းလေးပါ ...
Mr.Yang Yang ရဲ့ မျက်နှာထား တည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့ ယောက်ျားဆန်ဆန် တိုက်ခိုက်ခန်းတွေကိုလဲ ရင်ခုန်စွာနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် ...
သာမန် Drama / Romance ကားမျိုး မဟုတ်ပဲ Action , Adventure , Mystery , Supernatural , Zombies genre type မျိုးဖြစ်တာကြောင့် အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ငြီးငွေ့နေသူတွေအတွက်ရော စွန့်စားလိုပြီး အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကို ကြည့်ချင်နေသူတွေအတွက်ရော အကြိုက်တွေ့မယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် ...
Translator - Myat Shweyeai Khine
Encoder - Anonymous ၊ Kaung Min Set
Episode 10 - END ( Openload Link )
Action Adventure China Mystery Supernatural
Labels: Action Adventure China Mystery Supernatural
zwemen tun April 6, 2017 at 6:10 AM
မျှော်နေပါတယ် အပိုင်း 4
zwemen tun April 9, 2017 at 5:42 AM
zwemen tun April 9, 2017 at 11:14 PM
zwemen tun April 12, 2017 at 10:20 PM
အပိုင်း ၆ လေး လုပ်ဦးဗျာ Please!
phyo wai April 13, 2017 at 8:52 PM
zwemen tun April 14, 2017 at 9:29 PM
Ar Dan April 18, 2017 at 9:25 PM
မျှော်နေပါတယ် အပိုင်း ၉
zwemen tun April 24, 2017 at 10:27 PM
zwemen tun April 30, 2017 at 1:51 PM
rock linn.1994 May 3, 2017 at 7:48 AM
season2ရှိသေးလားမသိဘူး
NN August 9, 2017 at 8:57 AM
Ep 10 (End) can't be download.
Aung Ko Naing August 23, 2017 at 7:37 PM
Aung Ko Naing August 27, 2017 at 6:14 PM
episode 12 ထိရှိတာမဟုတ်ဘူးလား